Ukushintsha kwebhizinisi kushayela ukulungiswa ebuhlotsheni phakathi kwe-IT nebhizinisi. Amandla angaphakathi nangaphandle ahlanganisa izinhlangano ukuba zamukele izidingo zamakhasimende futhi zifeze ukusebenza ngendlela efanele. Ochwepheshe be-IT ngokuvamile badinga ukugxila ekubunjweni okusha. Njengamanje, ubunjiniyela obuningi bokusebenza kumele kubhekwe ngomgomo othile wokuphela wokukhipha ukuvimbela phakathi kwamakhono amasha kanye namasu ebhizinisi. Uzocabanga ukuthi yi-Togaf ngokuqondile.
I-Framework Architecture Framework, i-TOGAF, iyinqubo eqondwa ngokucacile ekudaleni ukuklama. Uhlelo oluphelele luhlanganisa amasu kanye nelungiselelo lezinsimbi zokusekela ukunikeza izinhlangano amandla okuqinisekisa ukuthi zonke izingxenye ezihleliwe zilungiswa ekubhekeleni okubalulekile kwebhizinisi.
Isiqinisekiso sokuthi wonke umuntu ukhuluma ulimi olufanayo.
Londoloza ibanga eliqhelile kusuka ekuphephile ukuya kumalungiselelo okuvimbela ngokubeka izici ezivulekile zokuklama ibhizinisi elikhulu.
Isikhathi sokungcebeleka kanye nokheshi, futhi usebenzise amafa ngokwengeziwe ngokwanele.
Ukufeza izinga elibonakalayo lokuzuza (ROI).
Uhlelo lwe-TOGAF lungasetshenziselwa kahle izendlalelo ezinhlanu, njengoba kuboniswe i-Open Group:
Imithetho Yokuklama, Umbono Nezidingo: Lolu hlu luveza isikhathi esingaphansi komjikelezo wokuthuthukiswa kwezobunjiniyela. Ihlanganisa idatha mayelana nokuhlukaniswa kwezinga, ukuhlukanisa abalingani, ukwenza umbono wokuklama, nokuthola ukuvunyelwa.
I-Business Architecture: Ichaza ukuthuthukiswa kwebhizinisi lokuklama ukuqinisa umbono obunjiniyela obumbene.
I-Architectural Systems Architecture: Lolu ungqimba lubonisa ukuthuthukiswa kohlaka lwezingqikithi zedatha ye-design yokwandiswa kufaka phakathi ukuthuthukiswa kolwazi nezakhiwo zesicelo.
I-Architecture emisha: Lolu ungqimba lubonisa ukuthuthukiswa kobunjiniyela obusha bokuklanywa kwendalo.
Engineering Ukuqaphela: Lo ungqimba ukuvuma izingxenye ezihlanganisiwe ezibalulekile ekushayeleni ibhizinisi.
Ngokwezifiso, ochwepheshe be-IT baye baqala ukuzungeze okwakamuva uhlaka lwe-Technology Architecture, kanye nokuthuthukiswa okunye nokuhlelwa kwamasha. Ukuvimbela ukugxila emkhakheni wodwa kungalingana nokusebenza esitolo-okwenza kube nzima ukufeza yonke imibono ehambisanayo yebhizinisi. Ukucatshangelwa kufanele kuzinikezelwe kuzo zonke izigaba ukuze kuqinisekiswe ukuhleleka okusemthethweni namazinga ebhizinisi, umbono, izidingo kanye nokuklama.
Izinhlangano zifuna kancane kancane ukuthi ochwepheshe be-IT baqoqe ukuqonda okuphelele kwebhizinisi ukuqinisekisa ukuthi amasha amalungiselelo okwanele okudingekayo kwebhizinisi, umbono kanye namasu. Ukuxuba amasu e-TOGAF kukhuthaza ukuqonda kwebhizinisi futhi kufezekisa i-IT ephathelene nalolu daba ukushayela ibhizinisi.
Togaf Training : TOGAF i-Open Group Architecture Framework, ichaza indlela enemininingwane futhi isekele izinsiza zokuthuthukisa ama-Architecture we-Enterprise.TOGAF 9 inguqulo yakamuva yohlaka lwe-Open Group. Kungashiwo ukuthi i-TOGAF 9 iyinhlangano yomhlaba jikelele ye-Enterprise Architecture.
Ukuxazulula Izinkinga Ezinkulu Kakhulu Nge-Togaf Yokuqeqesha